Yini eyenza isu eliphumelelayo le-backlink?
Uma kuziwa kwinqubo ye-Search Engine Optimization (SEO), iphrofayli yokuxhumanisa ephakathi nendawo iphakathi kwezinto ezisemqoka ezisetshenziswa yi-Google ukunquma isikhundla ngasinye sezinga lewebhu kuma-SERPs. Yingakho ukusebenzisa uhlelo oluhle lwe-backlink luhambisana nenqubekela phambili yangempela ekukhuthazeni okungcono kwe-intanethi kunanoma iyiphi enye into yokukala. Uma sicabanga ukuthi kunezici ezingaphezu kwezingu-200 ezibhekwa ngokusemthethweni yi-giant search giant manje, leso sisho mayelana nokubaluleka okukhulu kwe-backlinks yekhwalithi sinesibindi esihle, akunjalo? Yebo, ukuthola amasu okusheshayo futhi okulula emuva kwe-backlink kungaba okungaphezu kokukunika izixhumanisi eziphezulu. Futhi kusho ukuthi izinjini ezinkulu zokusesha (njenge-Google ngokwayo, kanye ne-Yahoo, noma i-Bing) zizodonsela iwebhusayithi yakho noma ibhulogi phansi ohlwini lwawo ama-SERPs. Kodwa yini eyenza isu lokuthuthukisa isixhumanisi eliphumelelayo? Ngikholelwa ukuthi wonke amasu we-backlink angashintsha kalula abe yimpumelelo ngempela ngokusebenzisa amandla wamaphephandaba wakho atholakele.
Asikho isidingo sokusho lokho kusuka kwombono wokwakha isixhumanisi, akuwona wonke amawebhusayithi noma amabhulogi azolingana nokunikeza isignali enamandla kakhulu izinjini zokusesha. Yingakho iningi labo bonke lifuna ukuxhumanisa okuningi nemithombo ephethe amaphuzu aqinile kusiphathi sekhasi, igunya lesikhulu, ne-PageRank. Ngakho-ke, kanjani ukuqinisekisa ukuthi amasu wakho we-backlink anengqondo ngokwanele ukubheja emithonjeni efanele yezixhumanisi ezingenayo? Ngokwenza kube njalo kuvumelekile futhi kusesikhathini ngokukhomba ngokuqondile. Phakathi kwamanye ama-media yolwazi, ngincoma i-Cision ukukhomba kuphela amasayithi ahloniphekile ahlobene nemikhiqizo yakho noma imakethe yemakethe. Ngaleyo ndlela, uzokwazi ukuhlunga zonke izikhalazo ezingenayo ngezixhumanisi ezingenayo ngezinkomba ezahlukene mayelana nenkampani, amawebhusayithi alo, ubukhulu bezithameli, imiklomelo yamanje, ubufakazi, njll.
Bewazi ukuthi ukwakha isu lakho lokubuyisela emuva emithonjeni yakho emakethe noma emakethe yakho kungakusiza ukwakha ukuthembela okuqinile? Ukubeka ngesiNgisi esicacile, amakhasimende akho angase abe amathuba okuba abe abathengi, uma iwebhusayithi yakho ikhonjisiwe noma ixhunywe kumthombo wesithathu onokwethenjelwa nokugunyazwa. Okungaphezulu - lokhu okungeke kwenziwe "abezindaba" kunamandla kunanoma yikuphi ukukhishwa kwezindaba ezikhokhelwayo. Vele uthathe kalula - umsakazo othembekile ungaphakathi kwezinto eziyinhloko ezithinta kakhulu izethameli zakho ezibhekene nezinqumo ezingakathuthuki zokuthenga.
Thola i-Media Media
Ukusebenza kwimidiya etholakalayo akuyona into edangalisa njengoba ungase ucabange. Eqinisweni, bekungeke kube khona imizamo yendabuko edinga isikhathi ukuze kutholakale abezindaba, okungenani ukwenza isu lempumelelo ye-backlink. Konke okudingayo lapha kunokufinyelela kanye nekhono lokuphendula ngamathuba wemidiya atholakele, ngokuvamile avunyelwe izintatheli. Ngaleyo ndlela, ngincoma ukusebenzisa amathuluzi e-intanethi afana ne-HARO ("Siza u-Reporter Out"), kanye no-ProfNet - ngabathola bobabili abafanelekile ibhulogi yami esanda kusungulwa kanye namaphrojekthi ambalwa ase-ecommerce asekelwe. Vele ubhalisele kulezi zingosi futhi ube yigunya langempela embonini yakho noma emakethe yezimakethe - thola izicelo zansuku zonke ezivela emithonjeni ephezulu efuna ochwepheshe ukuba baxoxwe noma bahlanganiswe ezindabeni zabo ezidumile, futhi bathole ezinye izixhumanisi eziphezulu ze-PageRank zalokhu Source .